Mpempe akwụkwọ acrylic nkedo doro anya, China Clear nkedo acrylic mpempe akwụkwọ Ndị na-emepụta ihe, Ndị na-ebubata, Ụlọ ọrụ - Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd.
>lọ>Product>Clear acryli mpempe akwụkwọ
Clear igba acrylic mpempe akwụkwọ
Mpempe akwụkwọ acrylic nkedo doro anya karịrị 92%, nwere oke molekụla dị elu, isi ike dị mma, ike na nguzogide kemịkalụ mara mma. A na-eji ya n'ahịrị mgbasa ozi maka ibipụta na ihe osise, yana maka ngwaahịa aka.
Mpempe akwụkwọ acrylic bara uru, plastik doro anya nke yiri iko, mana nwere ihe ndị na-eme ka ọ dị elu karịa iko n'ọtụtụ ụzọ. Acrylic na-enye nnyefe ọkụ dị elu ma nwee ike ịmepụta ọkụ ngwa ngwa na-enweghị nkwụsị nke anya anya.
◇ Nnyefe dị elu ruo 92%;
◇ Ekemịkalụ xcellent na nguzogide n'ibu: iguzogide acid na alkali;
◇ Ọ dị mfe ịrụpụta ihe: Enwere ike ịse mpempe akwụkwọ acrylic, kpuchie silk, kpuchie oghere, ma nwee ike ịkwọ ya, gwuo ya na igwe. ka ọ bụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọ bụla mgbe a na-ekpo ọkụ na ọnọdụ pliable.
◇ All acrylic Ibé akwụkwọ bụ UV mkpuchi, nkwa Ibé akwụkwọ na-adịghị edo edo mgbe eji n'èzí, nwere ike iji n'èzí maka 8-10 afọ.
Kwes Mgbasawanye ọnụọgụ Cmfcm/V < 6 × 10-5
◇ Asambodo nke mpempe akwụkwọ acrylic nkedo anyị nwetara: ISO 9001, CE, SGS DE, asambodo CNAS.
◇Enweghị ntụpọ, yana akụkụ PVC
Ejiri akwa dị ka 1220*1830mm, 1000*2000mm, 1220*2440mm, 1820*2420mm, 2050*3050mm
◇Ejiri akwụkwọ ọrụ aka nkịtị kpuchie ya
◇Ekpuchila ihe nkiri PE